Otutu Otutu Hoppers Automatic Fatịlaịza batching Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Na Akpaka Dynamic Fatịlaịza batch Equipment n'ozuzu na - anabata elektrọnik dị ka akụrụngwa metering. Ejiri igwe eji arụ ọrụ PID na igwe mkpu. A na-achịkwa otu hopper ọ bụla na-akpaghị aka iche iche.
Gịnị bụ Akpaaka Dynamic Fatịlaịza batching Machine?
Akpaka Dynamic Fatịlaịza batch Equipment A na-ejikarị eme ihe maka iji ezi ihe na-atụle ma na-eji ihe dị ukwuu na-emepụta ihe na-emepụta fatịlaịza na-aga n'ihu iji chịkwaa ndepụta nri ma hụ na nhazi ziri ezi.
Kedu ihe eji arụ ọrụ igwe eji eme ihe?
Akpaka Dynamic Fatịlaịza batch Equipment adabara na-aga n'ihu batching, dị ka fatịlaịza Efrata ke ebe a na-eme fatịlaịza. Saịtị ndị a chọrọ ka a na-aga n'ihu batching, n'ozuzu ha anaghị ekwe ka omume nke etiti batching kwụsị, nkezi nke ihe dị iche iche chọrọ ka sie ike. Na Akpaka Dynamic Fatịlaịza batching Machine a na-ejikwa ya na simenti, kemịkal, ígwè na ọrụ ndị ọzọ
Uru nke igwe akụrụngwa fatịlaịza na-agbanwe agbanwe
1) Adabara 4 ka 6 Efrata
2) Onye ọ bụla hopper nwere ike ịchịkwa onwe na n'ụzọ ziri ezi
3) Ejiri nkenke ≤ ± 0.5%, nkenke nkenke ≤ ± 0.2%
4) Enwere ike gbanwee usoro a n'oge ọ bụla dịka mkpa ndị ọrụ si arụ ọrụ
5) Site na mbipụta mbipụta akụkọ, enwere ike bipụta akụkọ ahụ n'oge ọ bụla
6) Na LAN ma ọ bụ usoro nlekota oru ntanetị, nwere ike jikọọ na ihuenyo iji gosipụta ihe ndị dị ugbu a.
7) Obere ebe obibi (overground, ọkara ala, ala), obere oriri ike, ọrụ dị mfe.
Akpaka Dynamic Fatịlaịza batching Machine Video Display
Akpaaka Dynamic Fatịlaịza batching Machine Model Nhọrọ
75m³ / awa
120m³ / awa
Akụrụngwa ziri ezi
Uru kachasị arọ
Ọnụ ọgụgụ nke silos
Nke gara aga: Ịwụ Igwe
Osote: Rewghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator